जैतुन (ओलिभ) को खेती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? - ParyatanBazar.com
जैतुन (ओलिभ) को खेती गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
पर्यटन बजार३१ बैशाख २०७६, मंगलवार मा प्रकाशित
वैशाख ३१, काठमाडौं । जैतुन एक सदबहार रुख हो । यसको पात प्रत्यक २-३ बर्षमा फेरिन्छ । यसको हाँगा फकृने खालको हुन्छ तर राम्रो काँटछाँट गरेमा राम्रो रुख बन्छ यसको जरा बलियो हुन्छ र सतहको माटोमा मज्जाले फैलिन्छ ।जैतुनको रुखको उचाई ३० फिटदेखी ५० फिटसम्म हुन्छ । यो धेरै समयसम्म बाँच्ने रुख हो । यसको आयु सरदरमा ५००-१००० बर्षसम्म हुन्छ । यसको फलको तेल स्वास्थ्यको लागी निकै फाईदा जनक मानिन्छ ।
नेपालमा जैतुनको खेती समुन्द्र सतहबाट १०५० मिटरदेखी २३०० मिटरसम्म गर्न सकिन्छ । हिँउ धेरै पर्ने ठाउँमा यसको खेती राम्रो हुँदैन । घाम लाग्ने, मलिलो माटो, चिस्यान बढी भएको र सिंचाई प्रसस्त भएको ठाउँमा जैतुनको खेती राम्रो हुन्छ ।
जैतुन लगाउँदा ४ मिटरको दुरिमा विरुवा रोप्नुपर्छ । १ रोपनी मा १०-१५ बिरुवा लगाउन सकिन्छ , जैतुन खेतिको लागी माटोको PH लेभल5– 8.5 राम्रो हुन्छ । जैतुनले रोपेको १ देखी १२ बर्षमा जात हेरी फल दिन्छ । बिभिन्न जातका जैतुन लगाएमा परागसेचन (Pollination) मा मद्दत पुगी धेरै फल्छ ।एउटा बयस्क जैतुनको रुखमा २०० देखी ५०० किलो जैतुन फल्छ ।३ देखी ५ केजी जैतुनबाट १ लिटर ओलिभको तेल निकाल्न सकिन्छ । ( राम्रो ब्रान्ड हरुले १५ केजिबाट १ लिटर तेल पनि निकाल्छ्न )
बिश्व बजारमा जैतुनको माग अत्याधिक छ । नेपाली बजारमा जैतुनको तेल २५०० देखी ३००० / लिटर सम्ममा बिक्री हुन्छ । साथै यसको हरियोमै अचार बनाएर पनि बेच्न सकिन्छ । एउटा बोट ५०० देखी १००० बर्ष बाच्ने हुँदा पुस्तौं पुस्तासम्म जैतुनको खेती राम्रो आम्दानिको श्रोत बन्छ । होलसेलमा प्रती किलो ५०० मा ओलिभ बिक्छ।